Xoojiyo Device Protective, Circuit fara baxsadeen - Demin
Circuit baxsadeen oo Taxanaha
Baxsiga Circuit fara baxsadeen
NC Circuit fara baxsadeen
Ghadafi Circuit fara baxsadeen
Haraaga ah ee hadda Protection Circuit fara baxsadeen
Doorsoon Case Circuit fara baxsadeen
Air Circuit fara baxsadeen
U beddelo Taxanaha
Open-Nooca Mindi Switch
Mini Change badan Switch
Switch Transfer Automatic
Xoojiyo Device Protective
Box Switch biyuhu
Doorsoon breaker case of taxane EZC iyo T1
Waxay yihiin mid ka mid ah mawjadaha wareeg cusub oo loogu talagalay by shirkadda our. Its danab ningax qiimeeyo waa 800V, waxaa haboon 50HZ AC waa, qiimeeyay danab ka hawlgala qalab 690V iyo below.The waxaa loo isticmaalaa in qabsiyada wareegay wareeggeedii iyo matoorrada qabsiyada bilaabay. breaker waxay leedahay hawlaha dollar, circuit gaaban iyo ilaalinta hoos-danab, iyo khadadka iyo qalab awood ka waxyeello ilaalin kartaa.
DMB6-80 1p C63 16/20/32/63 / 80A AC fasax circuit ...
riix breaker button
3 breaker pole
2/3/4 knifes takooro pole beddelato
breaker hagaajin karo
32a 63a 100a 160a 225a 3 pole biiro mindi
32A / 60A / 100A / 160A / 225A biiro mindi Transparent
32/63 / 100A go'doonsanaa Buugga Switch nooca kala iibsiga
Zhejiang Demin Electric Co., Ltd. waxa uu ku yaalaa Xiangyang Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Gobolka Zhejiang, Shiinaha. Isla mar ahaantaana, Liushi Town waxaa sidoo kale loo yaqaan Electric Capital ee Shiinaha. Demin Electric waa xirfadle ku hawlan low-danab design korontada, soo saarta, iibka iyo adeegga sida mid ka mid ah shirkada. Shirkadda Our inta badan soo saartaa DZ47 Ghadafi breaker, DZ47 breaker baxsiga, MCCB, DZ15 breaker, DZ15LE Baxsiga Circuit jebiya, DZ20 baxsiga taxane mawjadaha circuit, MCCB hufan, ACB, daaro baxsiga iyo derbiga badalato iyo saldhigyadiisa derbiga iyo wixii la mid ah.
circuit Protection jebiya (doorsoon circuit kiiska jebiya)
mawjadaha circuit Ilaalinta waxa loo qaybin karaa laba qaybood, mid ka mid ah waxaa loola jeedaa breaker kaliya si ay u ilaaliyaan hawlgalka caadiga ah, iyo kuwa kale ee ay tahay baahida breaker badbaadinta iyo hawlgal si kaladuwan labadaba. Ka dib markii nooca dambe ee baahida loo qabo xaaladda si ay u eegaan condit qalliinka ...
Electric fara baxsadeen , Mcb , Min Circuit jebiya , Dib u celi kulul baxsadeen oo dollar Circuit , Mccb doorsoon Case Circuit fara baxsadeen, circuit breaker Waayo, Qalabka ,